China L-Valine ntụ ntụ ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Tianjia
Ihe ọụ Beụ na-aba n’anya
Ngosiputa Ngwa & Chemicals
Ezigbo Sweettọ ptọ
L-Valine ntụ ntụ
NON-GMO Anọrọghị Anyịnya Soy
High Ọcha Preservatives B ...
Elu Ascorbic Acid dị elu ...
Aha aha: L-Valine
Usoro Molekụl: C5H11NO2
Ọdịdị: Ngwaahịa a bụ ntụ ntụ dị ọcha, enweghị ụtọ, mmiri mmiri.
PH uru nke 5.5 ka 7.0
Mbukota nkọwa: 25kg / gbọmgbọm
Ndaba: 2 afọ
Nchekwa: ventilated, dị jụụ, obere okpomọkụ nkụ
L-Valine bụ ihe dị mkpa amino acid dị mkpa maka ezigbo ụjọ sysytem na cognitive ọrụ. Ma ọ bụ otu n'ime atọ Chain Amino Acids (BCAAs). L-Valine enweghị ike ịmepụta ahụ ma gharịrị ya site na nri ma ọ bụ mgbakwunye.
1. L-Valine bụ ihe dị mkpa amino acid maka ịba ụba akpịrị na-arụ ọrụ na smoothing ụjọ usoro fuction.
2. L-Valine dịkwa mkpa maka imezi akwara, mmezi anụ ahụ na mmezi nke ezigbo nitrogen n’ahụ.
3. L-Valine dị na ukwu ndọpụ etoju na muscle anụ ahụ.
4. L-Valine dikwa nma idozi udiri amino acid nke oria ogwu riri isi.
1.Feed mezuwo Valine:
Valine dị ezigbo mkpa maka ezigbo ezì na anụ ọkụkọ dịka lysine, theonine, methionine na tryptophan. Na
Usoro bara uru nke Europe, a na-ahụkarị ya dị ka nke ise amino acid amachi. Dika enweghi ike ichikota ya n'ime aru, o choro mgbakwunye site na nri. Valine bụ ngalaba amino acid nke nwere ngalaba na leucine na isoleucine, nke metụtara ọtụtụ ọrụ dị mkpa nke ndu. Ọ nwere ike inyere aka melite mkpụrụ mmiri ara ehi maka ịgha mkpụrụ nke mmiri ara ehi ma wulite ọrịa anụmanụ.
2.For Food mezuwo Valine:
L-valine bụ ngalaba amino acid, yana leucine na isoleucine, nke dị mkpa iji dozie anụ ahụ, glucose ọbara mgbe niile ma nye ume maka ahụ mmadụ, ọkachasị maka mmega ahụ siri ike. Ya mere, enwere ike iji ya mee ihe ọ drinkụ drinkụ egwuregwu. E wezụga nke ahụ, a pụkwara iji Valine mee ihe dị ka mgbakwunye nri na ebe a na-eme achịcha iji melite ekpomeekpo nri.
3. Maka Medicine Grade Valine:
Dịka amino acid infusions, a pụrụ iji valine gwọọ ụfọdụ ọrịa imeju. E wezụga nke ahụ, valine bụ otu n'ime ihe ndị na-eme ka e nwee ọgwụ ọhụrụ.
1.Fore 10 afọ ahụmahụ na ISO gbaara
2.Factory nke ekpomeekpo na sweetener agakọ, Tianjia Own ụdị
3. Nyochaa Ihe Ọmụma Ahịa & omume na-agbaso
4.Timely Deliver & Stock Promotion na ngwaahịa na-ekpo ọkụ
5. A pụrụ ịdabere na ya & Na-agbaso ọrụ nkwekọrịta ahụ & mgbe ọrụ ahịa gasịrị
6. Ọkachamara na International Logistic Service, Legalization akwụkwọ & Usoro nyocha nke atọ
Nchịkọta & Mbupu
Anyị ga-enye ụzọ mbufe kachasị mma dịka usoro ndị ahịa na ihe achọrọ ya yana ọnụ ahịa asọmpi na nnyefe ọsọ ọsọ n'enweghị nsogbu.
Nke gara aga: NON-GMO Anọrọghị Anyịnya Soy
Osote: Ezigbo Sweettọ ptọ
Acgu na-achịkwa Citric Acid Monohydrate
Akwa Ogo Ascorbic Acid
Kachasị ere nri, ihe mgbakwunye Citric Acid Anhydrous
High Ọcha Preservatives BP mezuwo Sodium Benzo ...
Bụrụ akụkụ nke ọdịnala
Soy Protein kewapụrụ, Ascorbic Acid Powder Nnukwu, Mkpụrụ Mkpụrụ Mịpụta, Vitamin C Ascorbic Acid ntụ ntụ, Pure Ascorbic Acid ntụ ntụ, Aspartame,